Ngaba iifayile ze-ppsx kunye nendlela yokujonga iifayile ze-.ppsx | Iindaba zeGajethi
I-PPS. Zithini iifayile ze-ppsx kunye nendlela yokujonga iifayile ngolwandiso lweppsx
Microsoft PowerPoint Isoftware yokwenza intetho. Isetyenziswa ngokubanzi ekufundiseni, kwishishini nakwiindibano zosapho phakathi kwabanye. NgokukaMicrosoft, iingxelo ezingama-30 ezigidi zenziwa yonke imihla. Kwiminyaka embalwa edlulileyo, iifayile zePowerPoint beziqhubeka zijikeleza phakathi kwee-imeyile. Kungekudala ukujikeleza kwabo kuncitshisiwe, ukuze izibonelelo ze-gifs, kodwa ziyaqhubeka zijikeleza ngamanani amakhulu.
Sithetha ngeefayile ezandisiweyo.pps okanye .ppsx (olu lwandiso lokugqibela lusetyenziswa ukusukela kwinguqulelo ye-PowerPoint ka-2010). Ngokusebenzisa i-PowerPoint application sinokwenza kwaye sijonge ukuboniswa kubandakanya iifoto, isicatshulwa, iaudiyo kunye nevidiyo, esinokuthi sizilungiselele ukuze, lonke ixesha elithile okanye ngokunqakraza kwimouse, batshintshe ngokulandela i-odolo esekwe xa yayenziwe.
Olona khetho lufanelekileyo kunye nolucetyiswayo lokujonga ezi ntlobo zeefayile kukuba nesicelo esenziwe ngaso yiMicrosoft PowerPoint, eya kuthi isivumele ukuba siziguqule, ukuba inomdla wethu, okanye jonga kuphela kwisicelo esisemthethweni seMicrosoft esibizwa ngokuba yiMicrosoft PowerPoint Viewer, enokukhutshelwa ngokuthe ngqo kwiphepha leMicrosoft.
Uyifaka njani iMicrosoft PowerPoint Viewer ukujonga iifayile ze-pps / ppsx
Ndwendwela ikhonkco apho iphepha elisemthethweni leMicrosoft liza kuboniswa apho sinokukhuphela khona umbonisi wefayile yePowerPoint. Cofa ekukhupheleni, kuba ulwimi lwesicelo luya kukhethwa ngokuzenzekelayo.
Ke UMicrosoft uya kusicebisa ukuba sifuna ukukhuphela umbonisi wefayile yeLizwi kunye ne-plug-in yokugcina iifayile njengePDF. Siya kwikona esezantsi ekunene kwaye ucofe kuyo Hayi enkosi kwaye qhubeka.
Emazantsi kwesikrini, kuxhomekeke kwisikhangeli, isikhangeli izakusicela imvume yokukhuphela ifayile. Cofa ku Gcina kwaye ukhuphelo luya kuqala.
Emva kokukhutshelwa, siya kwisikhombisi apho usetyenziso luye lwakhutshelwa khona, oluya kuthi lube yiyo ngokungagqibekanga ifolda ebizwa Ukhuphelo kwaye siyenza ngokuchofoza kabini kuyo.
Ukuba ulawulo lweakhawunti yomsebenzisi lucela imvume yokufaka usetyenziso, cofa kwindawo ethi EWE. Kuza kuvela ipowusta apho usazisa ngemigaqo yelayisensi yesoftware kaMicrosoft. Siya kwithebhu ebekwe kwicala lasekhohlo lebhokisi, simakishe kwaye kwikona esezantsi ekunene, sinokucofa kuQhubeka.
Kuza kuvela umqondiso osazisa ukuba siza kuqhubeka nofakelo. Cofa kwindawo elandelayo nakwifestile elandelayo, cofa kuFaka, Ngaphandle kokuba sifuna ukuguqula isikhombisi apho sifuna ukusifaka khona.
Ekugqibeleni kuza kuvela ipowusta isazisa ukuba isicelo sifakwe ngokuchanekileyo. Cofa ku Yamkela.
Ukusukela ngoku ukuya phambili, ngalo lonke ixesha sizama ukuvula ifayile yePowerPoint ngesongezo. Inye kuphela into ekufuneka siyigcinile engqondweni kukuvula iifayile kuphela esaziyo ukuba zivela phi. Ngokubanzi, abahlobo bethu kunye nosapho basithumela iifayile nge-pps / ppsx ulwandiso olungenalo uhlobo lwentsholongwane. Nangona kunjalo, xa umntu wasemzini esithumela ifayile yolu hlobo, kusoloko kucetyiswa ukudlula kwi-antivirus.
Uhlaziyo lokugqibela: Ngamana u-2014
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » I-PPS. Zithini iifayile ze-ppsx kunye nendlela yokujonga iifayile ngolwandiso lweppsx
Izimvo ezi-57, shiya ezakho
Ndicinga ukuba eyona nto intle kukuba ucebise iOpenOffice, yasimahla kunye nokusebenza freeKungcono ukuqhela imikhwa elungileyo kunokuba mibi 🙂
Inqaku elilungileyo kubantu abancinci bendawo yaseViangre, kuba ungacacisa umahluko phakathi kwe .pps kunye .ppt kuba amaxesha amaninzi ndiyamangaliswa ngabantu abangayaziyo. 😉
Ngelishwa baninzi kakhulu abazaziyo ukuba bayintoni, kwaye bathumela uninzi lwezi.
Amaxesha amaninzi isisombululo liqhosha lokucima, nangona iimeko apho kufanelekileyo ukuzibona ndikhetha iOpenOffice, ubuncinci ndicinga ukuba yiyo kuphela ebalekayo kwezinye iiplatifomu ezingezizo iiWindows, nangona kunjalo indinika ukuthanda ukwazi esi sixhobo ungazange uve ngaso.
Ndiyathemba ukuba uyigqibile iposti
Iposti elungileyo, isixhobo osiphawulayo (umbukeli) silungile kwaye kulula ukusisebenzisa, kuyathakazelisa ukuba uphawule ngaso, kuba ngokuqinisekileyo baninzi abantu abangabaziyo ubukho bayo, nangona inexesha elide.
enkosi x izimvo zazincedo kakhulu. enkosi
Kutshanje ndifake iiwindows vista kwaye xa bendiya kwiifayile ze-imeyile nge-ext.pps ayivumanga ukuvula xa ndifaka iPowerPointViewer.exe iyeke ukubandezeleka
Khange ndikwazi ukufaka umbonisombonisombane, emva kweyure ngaphezulu kokulinda into ngokokuya kwam ibifakwa ekugqibeleni, ndinomyalezo ongenakwenziwa.
kutheni izobayi ????
Judith andinalwazi. Ubungumntu wokuqala ukuxela iingxaki ngofakelo lombonisi we-pps.
Ndinendawo yamandla kodwa iifayile ze-pps azivulwa ngokuthe ngqo ngokucofa kabini kufuneka ndiyirhuqe kwisibukeli samandla, ngaphambi kokuba zivulwe kodwa ndangena ekuvuleni njenge ... kwaye xa ndikhetha inkqubo leyo, I-icon ibekwe kwicala lefayile kwaye ayindivuleli nayiphi na enkosi kakhulu wenza umsebenzi omkhulu ukunceda abo esingabaziyo ndibone enkosi kakhulu
UCarlos ndiyathemba ukuba ndiza kwenza isifundo kungekudala kule nto uyibuzayo.
Molo INGXAKI YAM YOKUBA KUSUKA KWIXESHA UKUYA APHA NDIKHUPHELELE IIMPAWU ZAM KWI-PPS IFOMAT NANGOKUBA UZAMA UKUYIVULA IYAXELELA UKUBA AMANDLA AMAXABISO AKANAKUKUVULA INKCAZELO X SEKUGCINWE UKUBA NDIQINISEKE NJANI OKANYE KUYA KUBAKHO KWAMANYE AMAXESHA YIBA NOMBONI WENKQUBO YENKONZO KODWA KWABANYE, ANDIQONDA UKUBA KUTHENI KWENZEKA KWABANYE IIFAYILI NAKUBANYE ABANYE, ANDINAKHO NCEDA NDINCEDE NDIYABULELA IMPENDULO KWI-IMEYILE YAM ENGANDINCEDA xxxxxxxxxx
Andazi ukuba ndiyivule njani iposi kwaye andikwazi ukuthumela imiyalezo sitsho
Andazi ukuba kutheni ndingakwazi ukuvula i-imeyile yam okanye ukuthumela okanye ukufumana imiyalezo.
Ukuphendula andikwazi ukuvula imeyile kwaye andinakuthumela imiyalezo
Viniga ethandekayo: o Javi, njengoko ukhetha, inqaku lakho ebelidibene nam kwiforum belilungile, kodwa ayisiyongxaki yam, ndiyibona ngokugqibeleleyo kwi .pps umba kukuba xa ndibhala iPoint ifayile, indirekhodlela yona njenge .ppt kwaye ayithandi .pps, andazi ukuba kutheni okanye ungayenza kanjani. Ukuba ungandinceda, enkosi kakhulu. Elhugo
Inqaku linomdla, kufuneka ndongeze ukuba umbukeli ukhululekile kodwa hayi iPowerPoint apho ixhomekeke khona, ethi ihlawulwe kwaye ngaphandle kwayo ibingazukusebenza. Ihambile ngaphandle kokuchaza ukuba zenziwe njani ii-pps: ngokulula xa ugcina, khetha Gcina ngelo xesha "Gcina njengohlobo" kwaye ukhangele i * .pps ne-OK.
Uismael ukuhambelana namanye amagama sitsho
NDIYIFAKILE AMANDLA AMANDLA 2007 kwaye ANDINAKUVULA I .PPS
NDIBEKA KWI-FILE TYPE AMANQAKU AMANQAKU ESIDE SHOW. NDIYINIKELA UKUZIVULELE NDAYIGCINA:….
NDIYIGCINA KWIDESKI NDITHANDA XA NDIFUNA UKUYIVULA, AKUKHO NTO INJALO KODWA NDIZOKUYIQHATHA, AKUKHO NTO IVULEKILEYO
NDILINDE IMPENDULO KWIMEYILE YAM UKUBA INGABA
Ismael ingxaki yakho kukuba uya kuba uphulukene nomanyano lwe-porwerpoint kunye neefayile ze-pps. Unokwenza izinto ezimbini: faka iPowerPoint 2007 kwakhona okanye ufake umbukeli endikucebisayo.
Sele ndiyifakile kwaye wamkelekile. Ngokufanayo. xa ndiyivula, iyalayisha ize iphume ndiyigcinile… ndiyayigcina kwaye xa ndiyicofa ukuyivula, kufana nokuba andiyiniki, akukho nto iphumayo.
Kwiipropathi, uhlobo lwefayile lubonakala kwindawo yamandla okubonisa isilayidi.
Yintoni leya? kwaye kutheni iphuma? kwaye ndiyitshintsha njani? kuba ngaphambi kokuba loo mntu angaphumi.
Enkosi kubo bonke !!!!!! Kwaye ngaphezulu iposi yam iyagcwalisa kwaye bayandixelela ukuba kufuneka ndibabone kuba bakhulu
Ismael, ukhe wazama umbukeli endikucebisayo kweli phepha? isimahla.
NdineMicrosoft office Powerpoint Viewer 2007. Ndiyifakile. kodwa xa ndifuna ukuvula i-imeyile enefayile ye-.pps, ndiyayicofa ndiyivule kwaye ngokungathi khange icofe, ayenzanga nto kwaphela. Ndiyikhuphile kwaye ndayifaka kwakhona kodwa akukho nto konke konke
ndicela uncede !!!
Ndicinga kuphela ukuba i-antivirus yakho (ukuba unayo) ithathela ingqalelo ezo fayile ze-pps ziyingozi kwaye ayizivumeli ukuba zivule. Zama ukuyinqamula kwaye ubone ukuba injani, kodwa khumbula ukuyenza isebenze kwakhona kamva.
NDIYILUNGILE. Into endiyenzileyo kukubuyisela inkqubo.
EMVA KOKUSETYENZISWA KWEZINTO ZOKUGQIBELA, ITUNEUP KUNYE NAWONKE UMNTU ENDINAYO NOKU NGOKU NDIBONA.
NDIYABULELA NGAYO YONKE INTO NOKUXOLELA NGOKUXHASA.
NDISHIYE INDLELA YOKUGQIBELA I-PS3, UKUBA Uyayithanda.
Andiziboni iifayile ze-pps endinomboniseli ozifakileyo kwaye ndiyibuyisile inkqubo, ndizifundile izimvo zika-Ismael kwaye bendifuna ukwazi ukuba yintoni malunga nezinto eziluncedo, ukulungiswa kunye nokwazi ukuba ungandinceda ngento Enkosi.
Molo, ndinengxaki nepower point, ayizukuyivula, ndiyifakile, kodwa xa ndiqala ukuyinika, iphuma ngokungathi kufuneka ndiye kwifolda, umntu anganceda Mna ndingavuya kakhulu, ndongeze kwi-msn kwaye undixelele xxxxx
Molweni ngemini elungileyo! Beka kunye ifayile yefom yamandla endifuna ukuyithumela ngeposi kwaye ndiyigcine kwifomathi ye-pps, andazi ukuba ndingayenza njani le nto, ukuba kunokwenzeka ndicele umntu ukuba andincede andixelele ... ukusukela ngelixesha Ndizakuyigcina, kwaye ndikhangele ukugcina njengoko ii-pps zingandiniki ukhetho, Enkosi kakhulu! Ndingathanda nokubulela ngenkcazo enikwe apha ngasentla, intle kakhulu! 🙂
Ndiyabulisa, ndiyigcina njani ifayile njenge-pps kwindawo yamandla ka-2007, xa ndisithi "Gcina njenge", i-pps ayiveli
Mholo! Ndifuna ukwazi ukuba ndiyidlulisa njani inqaku lamandla ngeposi!
Kuba ndiyayenza, andikwazi kuba indixelela ukuba ifayile ayilayishwanga ngokupheleleyo okanye into enjalo.
Andazi ukuba kufuneka nditshintshe ifomathi.!
Nceda ukuba unganceda! haha
Molo, umbuzo wam malunga ne-pps ngulo ulandelayo. Xa ndivula i-hotmail yam kwaye andikhethi "khumbula idatha yam kule khompyuter", ndingagcina okanye ndicime ii-pps, ndingayivuli. Kodwa ukuba ukhetha "khumbula idatha yam kule khompyuter" ndingayivula. Ngaba ikhona indlela yokuziqwalasela ukuba zikwazi ukuzivula ngeposi ngaphandle kokujonga "khumbula idatha yam kule khompyuter"? .-
Ukusuka sele enkosi kakhulu !!!
ingelosi yaseMiguel sitsho
Ndingathanda ukufaka ifayile ye-pps, bandithumelele i-msn ngale fayile kwaye andikwazi ukuyivula
Phendula ingelosi yemiguel
Iviniga ndiyathemba ukuba uyandinceda, ndinombonisi ojonga umbane oxhonyiweyo kodwa iifayile endifuna ukuzivula kwifomathi ye-pps zonke zivulwa ngegama elingu-winword ukuze zichane kwaye ekugqibeleni andiboni nto, ndingayenza njani i-paa qm evulekileyo nabo ngombukeli ndiyathemba ukuba bandincede enkosi
Molo, malunga neentsuku ezimbini ezidlulileyo ndikwazile ukujonga ii-pps ababendithumele zona kodwa hayi ngoku, ndikhuphele ipowerpoint2007 kwaye ngoku ndingazijonga kuphela kwidesktop kwibhokisi yam yeposi ayinakwenzeka
ukhona umntu owaziyo ukuba kunjani? inyani kukuba iyandiphambanisa
Ngethuba lokuqala ndiza kuthumela kodwa ndibona ubunzima abanabo ngento elula eyandikhuthazayo ukuba ndiyenze, ukuvula ifayile ngolwandiso lwe .pps (intetho) ukuba uzimisele ukuyiguqula, tshintsha ulwandiso lube ngu. ppt kwaye ungayiguqula ngenqaku lamandla.
Ndiyithande kakhulu ingcaciso yakho kwaye inomdla kakhulu.
Enkosi ngezimvo zakho baya kundinceda kakhulu ...
UKUSETYENZISWA KONKE UMNTU.
Phendula ngobuhlanya, uphambene
Molweni ngale mihla!
Ngokwenyani le ndawo ibalaseleyo! Ngenxa yokuba umxholo wayo uyacacisa kwaye uyaqondakala kwii-newbies ezinjengam.
Mhlawumbi umntu angandinceda, ekuphela kwento endiyifunayo kukutshintsha ifayile ye-pps ibe ngu-ppt o.k.t.
Ndinefayile ebizwa ngokuba yimifanekiso.pps kwaye ndifuna ukuba ibe yimifanekiso.ppt. Ukuba ndenza elinye igama njengoko abanye bendicebisa, litshintsha igama kuphela kodwa hayi ulwandiso. Into endiyenzayo?
kubo bonke abo bangaboniyo iipps.
Endaweni yokusebenzisa ipowerpoint 2007, ndikhuphele ngo-2003 kwaye ibe sisandla esingcwele, ukufaka nokusebenza ngaphandle kokwenza enye into.
Jonga, ndinengxaki.Ndikwazile ukufunda iifayile eziqukethe ii-pps kodwa ngoku zikhutshelwa kuphela nge-bitcomet kwaye iifayile ziya kukhutshelwa kwaye andazi ukuba njani? Ndinokukwazi ukuzifunda ngokuthe ngqo ukuba unesisombululo, apho unesithunywa sam
enkosi ngoncedo lwakho iluncedo kakhulu, enkosi ngalo msebenzi wakho umhle
Jose Antonio sitsho
Molo Vinegar, ndikhangela isisombululo sengxaki ngee-pps's ndilibonile inqaku lakho apha kwaye libonakala lihle. Ndiyathemba ukuba ungandinceda ngale nto: Ndinefayile enkulu eneefayile ze-pps kodwa ndifuna ukubona umxholo wayo (ngaphandle kokuyivula, isilayidi sokuqala kuphela) esivela kwi-windows Explorer okanye kwenye inkqubo ukubona ukuba yeyiphi na yesihloko esinye. kwaye uzijoyine kwifayile enye. Ngeefayile ze-ppsx akukho ngxaki, umxholo wayo ubonwa ngokuzenzekelayo kwisikhangeli seewindows kodwa hayi ngee-pps. Enkosi kwangaphambili ngoncedo lwakho.
Phendula kuJose Antonio
Molo, lala kakuhle, ndwendwela inqaku lakho kwaye ndingathanda ukwazi ukuba ungandinceda na ngengxaki encinci. Andikwazi ukuvula iifayile zam ze-pps kuba indixelela ukuba ayilulo ulwandiso olusebenzayo nge-win32.Ndiyifakile i-ofisi ka-2007 kunye ne-powerpoimt kodwa xa ndivula imeyile yam ayivuleki ine windows vista starter. Baye bandivula ngokugqibeleleyo kodwa ukusukela ngolunye usuku ukuya kolandelayo bendinokuyivula ngakumbi, ndiyikhuphile iofisi kwaye ndayifaka kwakhona kodwa andazi ukuba ndenzeni kwakhona, nceda, ukuba unesisombululo, nceda, ndiyabulela wena.
Phendula kwi karita
uEfrayim lopez sitsho
Omnye umntu unokundicebisa ukuba indawo yamandla ombukeli u-2003 iyahambelana ne-vista, 2007 kunye neyona yakutshanje kubonakala kum windows 7.
enye inkqubo okanye ifom yokwenza ukutshisa ifayile ye-pps ezenzekelayo esebenzayo nekhawulezayo.
Into eyenza isebenze ukuvula ii-pps izilayidi ngokuthe ngqo ngaphandle kokuphuma kwibhokisi yencoko.
Phendula kwi-efrain lopez
Ndifuna ukwazi ukuba indawo yamandla ababukeli iyahambelana kwiinguqulelo zika-2003 2007 vista kunye new windows 7 enkosi ngokubhala umbulelo
Ndine Power Point 2007 kunye ne Power Power Viewer, kwaye andazi ukuba kutheni ngoku ndingazukuvula iifayile nge .pps kunye .ppsx ulwandiso oluza kum ngeposi, indixelela ukuba kufuneka ndidibanise inkqubo , Ndiyayenza kodwa ayiyiqondi. Ukuba ndiyigcina le fayile njengencamathiselo, ndingayivula
Ingxaki endinayo kukuba ndivula indawo yamandla ngo-2007, kodwa isandi asiviwa.
NdineVista kunye neOfisi 2007 efakiweyo.
Andikwazi ukuvula iifayile ze-pps eziya kumbono wam. Ndifakelwe indawo yamandla Ndifuna ukuyivula ngokuzenzekelayo. Ndingenza ntoni
Kwenzeka into efanayo kum, andikwazi ukuvula loo maphepha, ndenze yonke into, ndondlekile, apho ndibona khona iimpendulo, enkosi
Ukuba umntu angandinceda koku kulandelayo: ndineentetho ezi-3 ezahlukeneyo kwindawo yamandla.ppsx (iofisi ka-2007), kwangaxeshanye ndinekhadi lokubeka esweni izinto ezininzi kwizikrini ezi-3 kwi-cpu efanayo. Ndivula kwi-PowerPoint nganye nganye kwaye ngaxeshanye ndibathumela kwigadi nganye. ingxaki kukuba ekuqaleni ukuba bayabaleka kwaye babonwa kwiimonitha ezintathu, kodwa inye kuphela ehlala isebenza apho imouse icofiwe kwaye ezinye izikrini aziqhubeki ziqhuba, zihlala zimile, kwaye kuya kufuneka ucofe intetho xa ufuna ndifuna ukuba iqhubeke isebenza esweni oyifunayo, ndiyathemba ukuba ndichazile
Andikwazi ukutshintsha i-pps yolwandiso kwi-ppt, ukukhupha imifanekiso kwi-pps.
Ndiyathemba ukuba umntu othile unokundicacisela.
Molo, ndithenge ikhompyuter ngeWindows 7 kwaye ndiyifakile iofisi ka-2003 apho ndinenkqubo yamandla kodwa xa ndifumana ii-imeyile ngefomathi ye-pps andikwazi ukuyivula indixelela ukuba andinayo nayiphi na inkqubo enokuvula ifayile, ndiyikhuphele i-Microsoft Office PowerPoint 2007 Viewer kwaye andikaziboni iifayile.
Kodwa ukuba ndiyigcina ifayile kwaye nditshintshe ifomathi ibe yi-ppt ndiyayibona.
Ndijonge kwipaneli yokulawula, ndadibanisa uhlobo lwefayile kwinkqubo emiselweyo kwaye ndafumanisa ukuba andinayo i-pps extension, ndingayilungisa njani ukuze ndingagcini iifayile kwaye nditshintshe ulwandiso.
Enkosi kumagqabantshintshi ka-Jesusin kwaye emva kweveki yokuzama iinkqubo ezahlukeneyo zoncedo, bekusebenzayo ukufaka indawo yamandla ka-2003, isandla esingcwele, utsho njalo, enkosi kwakhona
NguYesu Sierra sitsho
Ndiyayixabisa kakhulu into yokuba uthathe inkathazo yokwazisa abo kuthi abakwaziyo kancinci okanye abazi nto ngale nto. Kuye kwaba luncedo olukhulu kum. Enkosi!
Phendula u-Jesús Sierra
Ndiyabulela kakhulu ngokuchaza izinto ngendlela kaThixo. Ingxaki yam kukuba ndenze intetho kwi-POWER POINT kwaye ndikwazile ukuyithumela ngeposi, kodwa xa ndiyivula, inkqubo iyavula kwaye ayiwenzi umboniso, ukuba ayindivumeli ukuba ndiyiguqule, andenzi njalo Ndiyazi ukuba ungayigcina njani ukuze ndingayivuleli ukuba ndiyiguqule, kodwa ndiyidlulise njengemovie.
Ndiyayixabisa nayiphi na igalelo.
Inkqubo i-PP 2003
Ndinengxaki, ndikwazile ukufaka i-pps ngeefoto ezininzi, kodwa andiyifumani ukuze ndilungelelanise ubungakanani, nasemva kokuyigcina kwaye xa ndiyivula kwakhona ayenzi mboniso kodwa kunoko ndiyivula ukuyiguqula, njengoko Kuya kufuneka ndiyenze ukuyigqitha ngokwesiqhelo njenge-pps.
Inkqubo yam yiWindows 7
Nceda, ndingavuyela iinkcazo ezisisiseko, izakhono zam zekhompyuter aziphambili kakhulu. Enkosi
Viniga othandekayo, ndiwalandela amaphepha akho, kwaye ndiyathanda ukuba usombulule ukungathandabuzeki kwethu, ukuza kuthi ga ngoku akukho nto yenzekileyo kum, kodwa kwiintsuku ezi-2 ezidlulileyo umhlobo undisusile kwinkqubo yomculo, kwaye ndikhuphe uhlaziyo oluninzi kubahlolokazi , ngokokungasebenzi kunye nekhompyuter bendihamba kancinci, kuba emva kwethutyana ndingakwazanga ukuvula ii-imeyile zam, ABAFAZANA bandixelela ukuba ndifuna ukusinika amandla kwaye yintoni enye, imicrosof yokuyivula, iviniga indixelele Ndiyisombulule njani, umhlobo wam uhambe nohambo, ndikhuphele i-msn kunye ne-live ebendinayo, okanye indlela endiyilungisa ngayo kubonakala ngathi ndicima uhlaziyo, ukusukela ngoko ii-imeyile azikavulwa, ndinombulelo kakhulu,
uyilayisha njani i-pps kwipowerpoint
Andikwazi ukuvula iifayile zephuzu lamandla ukuba i-hotmail ifike kum. Ungayisombulula njani ingxaki? Ndiyabulela kwangoko.
MHOLO!! mhlobo ndingathanda ukuba undincede, ndifuna ukuguqula ifayile yesilayidi ukubonisa ukuba yippt ukuze ikwazi ukuguqula umboniso,
Enkosi kakhulu, ulwazi lwakho lwaluncedo kakhulu kwaye luchanekile.
Ndinengxaki okoko ndinombono, kuba andifumani khetho lokuvula okanye ukugcina ngeposi (njengakuqala, ngaphakathi
Emva koko ndiyayivula kwaye ukhuphelo luye kwifolda yokukhuphela, kwaye kuya kufuneka ndisuse ukuze zingabinabunzima (bendidla ngoku ... vula. Ndiyibonile kwaye yahlala eposini kwaye andifuni enye (kwaye ukuba ndifuna ukuyigcina I yagcinwa njenge (. hayi ngoku) ndiyayibona kodwa ndiza kuyikhuphela kwifolda yokukhuphela (umqulu ovela kumbono
I-AdSense kunye nokuSebenza. I-AdSense Paradox
Uyifaka njani i-watermark kwimifanekiso yethu